Ngelixa eyona nto inomtsalane ku-Instagram kukuba liqonga lomfanekiso elithandekayo, ii-caption ziza kwisibini esisondeleyo xa kuziwa kwiimpawu ezibonisa ubuchule bazo. Iingcaphuno ezilungileyo zifunyenwe zandisa ulwazi lwebrand kwaye zinceda ukukhumbula uphawu. Kwakhona, i-caption yinkalo yeposi yakho onokubuyela kuyo ukuze ufumane ukuthanda ngakumbi kwimeko apho umfanekiso ungonelanga. A Ingcaciso emnandi Inokufumana abalandeli ukuba banike izimvo, ezinokuphucula ukubandakanyeka.
Umba obalulekileyo wokuzoba ukubandakanyeka ngakumbi kwiakhawunti yakho kukuqinisekisa ukuba amaxesha akho okuthumela intengiso angqinelana xa abalandeli bakho besebenza kakhulu. Akukho mntu "ixesha elifanelekileyo lokuthumela" kwi-Instagram - iyahluka ngeentlobo zeshishini kunye nendawo ekujoliswe kuyo. Oko kwathethi, umthetho ngokubanzi wesithupha ukutsala abathengi kukuthumela ngexesha iiyure zomsebenzi ngemini efana nesidlo sasemini (I-11: 00 ndiye kwi-1: 00 pmokanye emva komsebenzi (7: 00 pm ukuya 9: 00 pm). Oko kwathethi, kuya kufuneka uthathele ingqalelo indawo ojolise kuyo. Kukho neposti ethe kratya ngokubhekisele kwixesha lokuthumela kwi-Instagram ukusuka Hubspot ukuba ungajonga.
I-Instagram ilungele ukuthunyelwa kwiplatifomu, eyenza ukuba ibe liqonga elihle kuyo nyusa ishishini lakho ivuliwe. Ungasebenzisa i-Instagram feed yakho njengomthombo wohlaziyo kwamanye amaqonga anjenge-Facebook kunye ne-Twitter. Oku kunokusebenza ngokukodwa xa uqhuba ukhuphiswano. Abantu bayakuthanda ukuphumelela ukhuphiswano, kwaye ke ukufumana igama kwamanye amaqonga eendaba ezentlalo kunokukunceda ufumane ukubonwa ngakumbi kwegama lakho. Kwakhona, uninzi lwebrand lusebenzisa i-URL kwi-bio yabo ukunxibelelana nephepha labo le-Facebook ukusuka apho ungabakhokelela kwezinye ii-URL.